Ahoana no hamahana ny google captcha amin'ny alàlan'ny ReBreakCaptcha | Avy amin'ny Linux
Ahoana no hamahana ny google captcha amin'ny alàlan'ny ReBreakCaptcha
Nandritra ny fotoana vitsivitsy izao, ny ady amin'ny bot izay tompon'andraikitra amin'ny fanafihana tranokala spam sy ny fanandramana hisoroka ny fiarovana ny pejy web tsirairay dia nohamafisina. Iray amin'ireo fitaovana be mpampiasa indrindra hanandrana hiady amin'ireo mpanakorontana manelingelina ireto ny google captcha, indrindra ny kinova ReCaptcha V2, pero lamentablemente se ha difundido una vulnerabilidad en esta herramienta que permite resolver las captcha de manera automática.
Ity lahatsoratra manaraka fanabeazana ity dia hamela antsika hanitsakitsaka ny fiarovana ny ReCaptcha V2, manararaotra ny safidy audio izay atolotra azy. Ny lahatsoratra dia ara-tsindrimandry avy amin'ny fidirana manaraka, izay hazavaina amin'ny antsipiriany ny fahalemena ary atolotra ny script izay ahafahantsika mamaha automatique captchas.
1 Inona ny ReBreakCaptcha?
2 Mametraka sy manamboatra ReBreakCaptcha
3 Fehiny momba ny ReBreakCaptcha
Inona ny ReBreakCaptcha?
Izy io dia fampiharana maimaim-poana izay manararaotra ny fahalemena ReCaptcha V2, for hamaha automatique captcha, ho an'ity fampiasana ity ny automation library sélénium, la Google Speech Recognition Api ary algorithma isan-karazany.
Tsotra ny fitaovana, mandalo dingana telo, ny voalohany mamaha ny captcha malaza «Tsy robot aho«, Avy eo rehefa mivoaka ilay captcha hovahana dia safidio ny safidim-peo, raiso ny audio ary zarao amin'ny Google Speech Recognition ApiFarany, ampidiro ny isa eken'ny Api ary ampidiro ao amin'ny sahan'ny captcha.
Mety tsy hahomby matetika ny Api Google Recognition Api, koa ReBreakCaptchaManandrama safidy hafa mandra-pahitanao ny vahaolana mety.
Mametraka sy manamboatra ReBreakCaptcha
Hampiasa ReBreakCaptcha tsy maintsy manaraka dingana kely vitsivitsy isika, satria ny script tany am-boalohany dia arofanina amin'ny lalan'ny Windows.
Voalohany indrindra, tsy maintsy mametraka ny fiankinan-doha ilaina izahay mba hiasa ny script:
sudo pip hametraka selenium pydub SpeechRecognition
Manaraka izany dia tsy maintsy hatsaintsika ny tahiry fitahirizana ilay script:
Mandeha amin'ny birao misy cloned izahay ary manitsy ny kilasy, miaraka amin'ireo làlana mifandraika amin'ny Linux.
Tokony hanova ireto fampahalalana manaraka ireto izy ireo
Amin'ny fomba any Linux
Toy izany koa raha mampiasa python3, azafady soloina xrange ny range. Tokony hanova ny URL izay ilaintsika hampihatra ny script ihany koa isikaIzany hoe ilay tadiavintsika hamaha ny Script).
Azontsika atao izany amin'ny tsipika misy ireto manaraka ireto:
Farany dia tsy maintsy mihazakazaka isika ReBreakCaptcha, hanokatra automatique ny navigateur amin'ny url izay efa naseho izy ary hanatanteraka ny dingana hamahana ilay captcha resahina.
Fehiny momba ny ReBreakCaptcha
Ity script ity dia mety ho fototry ny fampiasana azy amin'ny fomba samihafa ary amin'ny python miaraka amina dingana tsotra dia afaka manatsara azy isika. Ny fampiasana an'io fitaovana io dia tokony ho amin'ny fampiasana fanabeazana, ary ho an'ny fiaraha-monina amin'ny ankapobeny dia zava-dehibe ny fanaparitahana azy satria manome toky fa tsy ho ela dia hanana patch izay hamaha ity fahalemena ity isika.
Miasa hatrany ny marefo hatreto, noho izany dia ampirisihina ireo mpampiasa mampiasa ReCaptcha V2 mameno ny fiarovana anao amin'ny fitaovana hafa, indrindra ny detection IP izay manandrana mamaha captchas matetika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Ahoana no hamahana ny google captcha amin'ny alàlan'ny ReBreakCaptcha
ary ho an'ny varavarankely?
Azonao atao ny mampiasa azy io satria avy amin'ny tahiry
Misaotra nizara, na dia efa namaky ny lohahevitra voalohany aza https://east-ee.com/ Toa tsy dia mahavariana ny tahan'ny laharam-pahamehana, saingy maro ny mpampiasa no manamarika fa tsy mahavita afa-tsy ny mamaha ny captchas mora indrindra amin'ny natiora efa ambany.
Raha ny marina dia ambany ny tahan'ny tratra (Amin'ny fitsapana ataoko 1 isaky ny 7 voavaha), na izany aza, misy ny faharefoana ary azo inoana fa nohatsaraina ilay fitaovana ka hiakatra ireo fampitahana ireo.
FanarenanaPc dia hoy izy:
Misaotra tamin'ilay lahatsoratra, nanompo ahy be dia be ny marina!
Valiny amin'ny RecoveryPc
cristhiam dia hoy izy:
Rahalahy afaka manazava bebe kokoa momba ny fametrahana azy amin'ny varavarankely ve ianao?
Mamaly an'i cristhiam
Misaotra nizara androngo; mivantana any amin'ny scoreboards hilalao kely aoriana. Satria any Python izy io, dia mila manararaotra ianao.
wilber antonio dia hoy izy:
Fiarahabana am-pitiavana sy fankasitrahana noho ilay lahatsoratra, izay tena tsara sy mahaliana. Azafady mba alefaso amiko ilay scrypt ho an'ny windows, satria tsy hitako izany na aiza na aiza, misaotra betsaka amin'ny fotoananao sy ny sainao.
Mamaly an'i wilber antonio
Carr dia hoy izy:
Tsy mamaha ny capcha izy ary mandefa ity fampitandremana ity amiko
Fampandrenesana Runtime: tsy nahita FFmpeg na avconv - tsy mandeha amin'ny FFmpeg, fa mety tsy mandeha
mampitandrina ("Tsy nahita FFmpeg na avconv - tsy mandeha amin'ny FFmpeg fa mety tsy mandeha", RuntimeWarning
Mamaly an'i Carr
faribolana angelis dia hoy izy:
Salama aho manandrana misoratra anarana amin'ny pejy iray fa rehefa miditra aho dia TSY mahazo mifandray amin'ny RECAPTCHA inona no dikan'izany, misy olona afaka manampy ahy
Mamaly ny tadin'ny angelis
jesosy ramos dia hoy izy:
Ahoana ny famahana ny capcha amin'ny isa ampiana, esorina, fampitomboana
Valio Jesosy jososy
ary ny rohy fampidinana?
Jose fernandez dia hoy izy:
Mitady fangatahana capchat aho
Mamaly an'i jose fernandez
ana z. amoron-kavoana v. dia hoy izy:
Ny tadiaviko dia ny mandalo na mamoha ilay captcha, tsy azoko ampitaina izy ireo, tsy manokatra izy ireo
Mamaly an'i ana z. amoron-kavoana v.
iraida quiroz dia hoy izy:
Mila mamaha ny olan'ny RECAPTCHA aho ary tsy haiko ny manao azy, afaka manampy ahy azafady ianao
Mamaly an'i iraida quiroz
MacKey-255 dia hoy izy:
Azonao atao koa ny mampiasa GoodByeCaptcha izay mampihatra ny detection sary izay misoroka ny olan'ny Andramo indray rehefa manandrana mamaha ny audio im-betsaka ianao.
Valiny amin'ny MacKey-255
Rambox: Ny serivisy fandefasana hafatra sy mailaka rehetra